ngobuqhetseba bomlingo obulandelayo, ii-pixel eziphathwayo zenza ii -apps zanyamalala
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Kwiqhinga elilandelayo lomlingo, ii-handset zePixel zenza ukuba ii-icon zeapp zisuswe
Kwiqhinga elilandelayo lomlingo, ii-handset zePixel zenza ukuba ii-icon zeapp zisuswe
Ngokuka iiposti zeReddit (nge 9to5Google ) Isiphene esitsha esingaqhelekanga sichaphazela ezinye izixhobo eziphathwayo zikaGoogle eziqhuba i-Android 10. Emva kokufaka isikhuselo sangoDisemba se-Android, ii-icon zeapp ziye zanyamalala ngokungaqhelekanga kwiPixel Launcher eshiya igama leapp kwiscreen. Kodwa kuba akukho gama lisetyenzisiweyo kwii -apps ezintlanu kwitreyi yeeFavorites, ii-icon ezingekhoyo zishiya indawo engenanto kwaphela. Kungenxa yokuba i-ayikhoni ihambile ayithethi ukuba i-app ayifakwanga; Ukucofa kwindawo engenanto kusaqhubeka nokuvula usetyenziso olukhethiweyo.
I-bug ayinakuphindwa kwaye i-icon ye-app echaphazelekayo ihlala iyeyezinye ii -apps zokugqibela ezivulwe ngumsebenzisi. Izikhalazo zithunyelwe ngabantu abadlala iPixel 2 XL, iPixel 3a kunye neemodeli zePixel 4. Singaxela ukuba le bug ayichaphazelekanga ngePixel 2 XL yethu eqhuba i-Android 10 ngohlaziyo lokhuseleko lukaDisemba olufakelweyo.
Ukuba ii-icon ze-pixel zeapps ziyisiphatho sefowuni yakho, unokufuna ukuseta kwakhona isiqalisi sePixel ngokusula idatha kuyo. Yiya eUseto>Iiapps kunye nezaziso>Ulwazi losetyenziso. Skrolela ezantsi kwiPixel Launcher kwaye ucofe kuyo. Emva koko ukhethaUkugcina kunye ne-cache>Coca indawo yokugcina. Ukuba ii-icon ezingekhoyo ziyabuya, wena & apos; ulungile ukuhamba. Ukuba akunjalo, kuya kufuneka uthembele kuGoogle ukukhupha uhlaziyo. Okwangoku, kunokwenzeka ukuba inkampani ayazi nokuba lo mba ucinga ukuba khange ibe yingxaki ebanzi.
Iimpawu zeapp ziyanyamalala kwisiqalisi sePixel
Omnye wabaRedditors onale ngxaki wabelane ngevidiyo ebonisa ibug isebenza . Ukuba iPixel yakho isebenza kwaye yenza ukuba imifanekiso inyamalale, ungaqhagamshelana noGoogle ngokuyaUseto>Iingcebiso kunye nenkxasouze ukhethe Ifowni okanye Ingxoxo.
I-samsung galaxy s7 yokhuseleko lwamanzi olunganyangekiyo
Izixhobo ezilungele ii-2 vs iigesi s3
I-chip ye-a8 enezakhiwo ezingama-64
I-Samsung Galaxy Note5 vs Apple iPhone 6 kunye
IVerizon ityhila amaxabiso, ukukhutshwa kwemihla yezixhobo ezitsha zeApple
Ukuthelekiswa kwesicwangciso senyanga se-iPhone 5: T-Mobile vs AT & T, Verizon, kunye ne-Sprint
I-BLU Vivo XL4 yifowuni enexabiso eliphantsi elingahambelaniyo ne-T-Mobile kunye ne-AT & T
Idili: Thenga i-iPhone XR nge- $ 300 kuphela kwi-AT & T (umgca omtsha uyafuneka)
Ixabiso leHuawei Mate 10 kunye ne-10 Pro kunye nomhla wokukhutshwa
I-Mophie Juice Pack ye-Samsung Galaxy S6 kunye ne-Galaxy S6 Edge iphindwe kabini kubomi bebhetri yeefowuni
IJMeter Pass eziguquguqukayo phakathi kwamaQela oMtya
Ungayinyanzela njani imbonakalo yomhlaba okanye ye-portrait kwii -apps ezinjenge-Instagram kunye nezinye (i-Android)
Indlela yokuqalisa i-Android 4.1+ kwiNdlela ekhuselekileyo